Mere ndị mmadụ na-eme ememe Black Friday? | Black Friday 2017 aBỊA 24 Nov
Mere ndị mmadụ na-eme ememe Black Friday? Black Friday bụ a shopping ụbọchị maka a Nchikota ihe. Onye ọ bụla na-aga shopping. Dị ka ndị mbụ ụbọchị mgbe ikpeazụ isi ezumike n'ihu Christmas, ọ na-eme unofficial mmalite nke Christmas shopping oge. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji na-azụ ha. Ọ routinely kemgbe kpa shopping ụbọchị n'afọ kemgbe 2005. na 2014, emefu olu on Black Friday dara maka oge mbụ ebe ọ bụ na 2008 nlaazu. $50.9 ijeri ọnwụ e mefuru n'oge GỤKWUO [...]
Milan Ejiji izu ịtọọ oge na September 2017
Milan Ịtọ oge nke na-egosi. Milan Fashion Week na-abịa ụbọchị. ... Alberta Ferretti | Milan Fashion Week Live Stream 5:00 pm · Alberta Ferretti Milan Fashion ... Ejiji Week ụbọchị maka Milan, Spring, na Fall, February, na September. Na-abịa ihe omume a A izu ejiji ga-adị ka ụbọchị ndụ gị, Official weebụsaịtị. Live gụgharia Woman S / S 2018 ejiji na-egosi, kalenda, ezigbo oge foto na anya, na-elekọta mmadụ iyi na ozi ọma. Jungsis na-aga Milan Fashion GỤKWUO [...]
100+ Best Collection abịa UK, US Women Uwe Style
100+ Best Collection abịa Women kacha mma imewe a nri ehihie, US, UK, Good News The achọ kasị pụta ìhè, A nta mfe collection ma mara mma na uwe na-abịa na US, UK ọtụtụ ndị na-atụ anya na-a ọhụrụ style, adịghị achịkwa ndị price tupu ị na-ahọrọ na mgbe ahụ ị ga-enweta ga-akwụ ụgwọ. N'IHI gịnị ẹbọ achọ pụtara ìhè??? Ebe a ole na ole ọnọdụ na-enye anyị. 2017 abịa ọhụrụ styling Gbalịa ile??? Ọ dịghị onye na-emegharị ya??? Okpoyomde GỤKWUO [...]
30+ The Special Eid Female Uwe Collection na 2017
Gịnị bụ New Nchịkọta??? The ụmụ agbọghọ dị nnọọ mmasị na Eid. Girls ma ọ bụ ndị inyom na-achọ mgbe nile na-egosi na ndị a mara mma karịa ndị ọzọ mgbe niile. Ya mere, ha na-chọọ ọhụrụ Uwe na ọhụrụ akpụkpọ ụkwụ. Ya mere i nyere a ọhụrụ 2017 Uwe eserese. M na-achịkọta ọtụtụ Uwe aghụghọ na isiokwu a. Ya mere ndị inyom na-na-ewere a otutu enyemaka n'isiokwu a iji họrọ ya Eid uwe dị ka a mma ma ọ bụ dị ka nke a mara mma uwe nke ọkụ ya. Ọ bụ otú ahụ mara mma Uwe n'isiokwu a. M olileanya na ị ga-amasị ndị a GỤKWUO [...]